Virus kicida shubo Filter - Shiinaha Shandong Zhongbaokang Medical
Filter Dhimista Leukocyte
Plasma Virus kicida
Device Heerkulka Low
Injector Needleless Best
Virus kicida shubo Filter
Brand: ZBK ama OEM
Asal Product: Shiinaha
Waqti Delivery: 4 todobaad
Awoodda Supply: 15,000 nooc ah maalin kasta
Waxaa loo isticmaalaa in daawaca fayraska on plasma, nuugo methylene ku daray buluug iyo shaandhayso leukocyte ee plasma. Waa in loo isticmaalaa tallaabadaas la nabadgelyada Virus Medical kicida ah.
Tilmaamaysa saamaynta inactivation virus: VSV≥6lgTCID50, Sindbis≥6lgTCID50.
heerka haynta celcelis ahaan ee factor≥80 xinjirowga plasma ku% ugu weyn.
No kala duwanaansho ku immunogenicity borotiinada plasma
Inta ay haraaga ah ee leukocyte halkii plasma unit <5.0 × 105 / unit (leukocyte rate≥99.9 saarista%)
Heerka nuugista methylene blue≥85%
The midabka iyo muuqaalka plasma ka dib markii sifeynta ma ay si weyn u kala duwan ka mid ah kuwii plasma caadiga ah.
sifeynta Quick, waqtiga shaqada lagu badbaadinayo, markii dabaqii labaad waa 3-4 daqiiqo
Waa in la wada isticmaalo qalabka inactivation ee warshad isku mid ah oo la xaqiijiyey by habka loo gaaro waxtarka alaabta aan firfircooneyn ah.
Spike, joojin clip, Qeybta filter adsorption, isku tallaalidda, MB dar Qeybta, bacda kala iibsiga dhiigga, dhuumaha.
Certificate: CE, ISO9001, ISO14001, IS013485
Previous: Nabadgelyada kicida Virus Medical Waayo Plasma
Next: Lightproof galiyey Set Iyadoo Laba Sabuul
filter Leucocyte la tuuro
la tuuro filter galiyey Cayiman
Sifeey Warshadaha isticmaalo
filter Calan Waayo Bangiga Dhiiga
faleebo Set Iyadoo Filter Cayiman
Set galiyey Iyadoo filter Cayiman (One Spike)
faleebo Set Iyadoo filter Cayiman (Laba sabuul)
faleebo Therapy filter
faleebo Light-Caddaynta Calan Iyadoo Filter In-Line
faleebo Light-caabida Calan Iyadoo filter qiray (One Spike)
faleebo Light-caabida Calan Iyadoo filter qiray (Laba sabuul)
Lightproof galiyey Set Iyadoo filter Cayiman
Filter Medicine Liquid
Filter shubo Medical
Preci se Filter
Cayiman Filter Drug Liquid
Presion Sifeey galiyey Set
Cell White Blood filter
White unugyada filter
Nabadgelyada kicida Virus Medical Waayo Plasma
Shandong Zhongbaokang fulisaa Medical Co., Ltd
29 siyaabood oo ka badan diirada iibka
Si loo sii xoojiyo wacyiga marketing iyo awoodda iibka suuq ee shirkadda, sida qorshaha tababarka sanadlaha ah ee shirkadda ee sannadka 2017, on April 14-16, Taibao Group abaabulan yahay? ...
dhaqdhaqaaqa deeq dhiig aan la bixin ee Tai ...
Taibao Group 17 Shaqaalaha Sports kulan